Zvinongoda kuzvipira: Madzibaba Masango | Kwayedza
Zvinongoda kuzvipira: Madzibaba Masango
07 Jun, 2019 - 00:06	 2019-06-06T17:56:59+00:00 2019-06-07T00:04:36+00:00 0 Views
MADZIBABA Strive Masango vechechi yeKubata kwaVapositori iyo inowanikwa kuRugare, muHarare, vanoti vasimudza mureza weZimbabwe kuburikidza nekushanyira nyika dzakasiyana vachibatsira vanhu mumatambudziko avo.
Madzibaba Masango nemusi weChipiri chino vakadzoka kubva kuJohannesburg, kuSouth Africa, uko vakanoita mazuva variko.
Vanoti pavaive kuSouth Africa, kwakauya zviuru nezviuru zvevanhu zvavakashandira.
“Basa raMwari rinoda kuzvipira uyewo munhu uchifamba muhutsvene nekudaro mbiri yavapo yekuti ndasimudza mureza weZimbabwe munyaya dzechinamato haisi yangu asi kuti ndeyaMwari,” vanodaro Madzibaba Masango.
Vanoti kune vakawanda vakapa huchapupu kuburikidza nekubatsirwa uko vakaitwa.
“Inyaya yatinotenda zvikuru nekuti zita reZimbabwe riri kusimukira nekuda kweminyengetero nekuwedzerwa kwenyasha kwatiri sevanamati. Ndichadzokera kunyika iyi mukupera kwaChikumi,” vanodaro.